प्रचण्डले कांग्रेस सिध्याइदिने !
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई सचेत गराएका छन्। युवा संघ नेपालको ‘साइबर सर्कल’ घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोध गर्दै उनले प्रचण्डले सिध्याइदिने भन्दै सचेत गराएका हुन्।
बुधबार, मंसिर ८, २०७८ १०:०४
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई सचेत गराएका छन्। युवा संघ नेपालको ‘साइबर सर्कल’ घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोध गर्दै उनले प्रचण्डले सिध्याइदिने भन्दै सचेत गराएका हुन्। ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
एमाले बिगार्न नसकेर कांग्रेसलाई बिगार्न प्रचण्ड लागिपरेको भन्दै उनले भने, ‘हामीलाई बिगार्न प्रचण्डले खोजेका थिए। तर, सकेनन्। अहिले कांग्रेसमा गएका छन्। म भन्छु, होसियार कांग्रेस प्रचण्डले सिध्याउलान्।’ कांग्रेस प्रचण्डको हात समाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्दै ओलीले कांग्रेस विचार र नीतिमा पनि बुढो भइसकेको टिप्पणी गरे।
उनले अब एमालेले कुनै पनि पार्टीसँग एकता र एकीकरण नगर्ने स्पष्ट पारे। तर एमालेमा आउनेहरूका लागि भने बाटो खुल्ला रहने उनले बताए। ुहामीले एकता गर्नुपर्ने अब कुनै पनि पार्टी बाँकी रहेन नेपालमा। अब एमालेमा नो एकता नो एकीकरण,ु उनले भने,ुअब कोसँग एकता गर्नुपर्ने माधव नेपालसँगरु माधव नेपालको पछि लागेर जानुभएका साथीहरू आउनुहोस् एमालेमा।ु
एमाले बिगार्न नसकेर कांग्रेसलाई बिगार्न प्रचण्ड लागिपरेको भन्दै उनले भने, ‘हामीलाई बिगार्न प्रचण्डले खोजेका थिए। तर, सकेनन्। अहिले कांग्रेसमा गएका छन्। म भन्छु, होसियार कांग्रेस प्रचण्डले सिध्याउलान्।’
कांग्रेस प्रचण्डको हात समाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्दै ओलीले कांग्रेस विचार र नीतिमा पनि बुढो भइसकेको टिप्पणी गरे।
उनले अब एमालेले कुनै पनि पार्टीसँग एकता र एकीकरण नगर्ने स्पष्ट पारे। तर एमालेमा आउनेहरूका लागि भने बाटो खुल्ला रहने उनले बताए। ‘हामीले एकता गर्नुपर्ने अब कुनै पनि पार्टी बाँकी रहेन नेपालमा। अब एमालेमा नो एकता नो एकीकरण,’ उनले भने,’अब कोसँग एकता गर्नुपर्ने माधव नेपालसँग? माधव नेपालको पछि लागेर जानुभएका साथीहरू आउनुहोस् एमालेमा।’